ရောင်းဝယ်သူတိုင်း သိထားသင့်သည့် စကားလုံးများ
အရောင်းအဝယ် လောကကြီးဟာ ခက်ခဲမှုတွေနှင့် နားမလည်နိုင်သော စကားလုံးတွေနှင့် ပြည့်နှက်နေပါသည်။ လူသစ်လေးများ ထိုစကားလုံးများနှင့် ကြုံရသည့်အခါ၊ အရောင်းအဝယ်သည် သူတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဟု ထင်သွားတတ်ကြပြီး၊ Forex မှာ ငွေအမြောက်အများ ရှာနိုင်မည့် မျှော်လင့်ချက် ပျောက်ဆုံးသွားတတ်ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ ဒါဟာ ကြီးမားတဲ့ အမှားကြီးတစ်ခုပါပဲ! ကျွန်တော်တို့သည် အမြတ်အများကြီးရနိုင်မည့် သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်များနှင့် ပိုနီးစပ်လာအောင် အကူအညီဖြစ်စေရန် သုံးအများဆုံး အရောင်းအဝယ် စကားလုံးများနှင့် ယင်းတို့၏ ဖွင့်ဆိုချက်များကို စုစည်းပေးထားခဲ့ပါသည်။
ဝက်ဝံ (သို့) ကျဈေးနှင့်ပြန်ဝယ်ရန် စတော့ရှယ်ယာများရောင်းသူ
“ဝက်ဝံ” ဆိုတာ ငွေကြေးအတွဲတစ်ခု၏ တန်ဖိုးသည် အောက်သို့ရွှေ့လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သည့် ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဒီလိုရောင်းဝယ်သူ၏ ဗျူဟာသည် ဤအတွဲကို ရောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဘာလို့ အကျလဲ? ဈေးနှုန်းဇယားအပေါ်မှာ မှီတွယ်နေသည့် စိတ်ဆိုးနေသည့် ဝက်ဝံတစ်ကောင်သည် ယင်း၏ လက်သည်းများနှင့် အောက်သို့ဆွဲချသည် ဆိုပါစို့။ အဆိုပါ နာမဝိသေသန “အကျ”သည် ကျဆင်းနေသည့် ဈေးလမ်းကြောင်းကို ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။
နွားသိုး (သို့) အတက်ဈေး
“နွားသိုး” ဆိုသည်မှာ ဝက်ဝံ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ဒါသည် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သည့် ရောင်းဝယ်သူများ၏ အမည်ပြောင်ဖြစ်သည်။ ဝေါဟာရသည် နွားသိုးတစ်ကောင်မှ ယင်း၏ ဦးချိုဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကို မြှင့်တင်လိုက်သည့် စိတ်ကူးအပေါ် အခြေခံထားပါသည်။ “နွားသိုးနှင့်တူသော” ဆိုသည့်စကားလုံးလဲရှိပြီး: အတက်ဈေးလမ်းကြောင်းသည် နွားသိုးနှင့်တူသော လမ်းကြောင်းဟုခေါ်သည်။
ဘရက်တန် ဝုဒ် စနစ်
ဒါသည် ဘရက်တန် ဝုဒ်လို့ခေါ်သည့်အရပ်တွင် ၁၉၄၄ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ရွှေစံအပေါ် အခြေခံပြီး ယခင် ဘဏ္ဍာရေး စနစ်ကို အစားထိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘရက်တန်ဝုဒ် စနစ်၏ အဓိက စိတ်ကူးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဒါကို တစ်အောင်စလျှင် ၃၅ဒေါ်လာ ပုံသေနှုန်းတွင် ရွှေအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အခြားနိုင်ငံ ငွေကြေးများသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကို ဤစနစ်အားထိန်းချုပ်ရန် စတင်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ “ဘရက်တန် ဝုဒ်” ဆိုသည့်နာမည်ကို ငွေကြေးများအကြောင်း ဆောင်းပါးများ ဖတ်ရှုသည့်အခါတိုင်း တွေ့မြင်နေနိုင်ပါသေးသည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်တူစကားလုံးဖြစ်သည်ဟု ရိုးရိုးလေးပဲ သတိရမှတ်သားထားပါ။
ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ငွေကြေး၊ ပိုက်ဆံထောက်ပံ့ရေး နှင့် အတိုးနှုန်းအပေါ် တာဝန်ရှိသည့် လွတ်လပ်သော အမျိုးသားရေး အာဏာပိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ငွေကြေးမူဝါဒကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်ဘဏ်များကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဗဟိုဘဏ်၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များကတော့ ပြည်တွင်းငွေကြေးကို တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီး၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် Forex ဈေးကွက်ရှိ ငွေကြေးများကို ဝယ်ယူခြင်း(သို့) ရောင်းချခြင်းဖြင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို လွှမ်းမိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် ယင်းနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးသည် ဈေးအလွန်မြင့်တက်ခြင်း နှင့် မြန်ဆန်ခြင်း (သို့) ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ ပြိုလဲပျက်စီးတဲ့အခါမျိုးမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။
ကြားဝင်ခြင်း နှစ်မျိုးရှိပါသည် :
• ဗဟိုဘဏ်မှ နိုင်ငံခြားငွေကြေး ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် ပြည်တွင်း ငွေကြေး အားနည်းစေရန်ကြိုးစားသည်။ ဤနည်းလမ်းကို ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် တင်ပို့ကုန်များကို ထောက်ပံ့ပေးလိုသည့်အခါ အသုံးပြုပါသည်။
• ဗဟိုဘဏ်မှ ဈေးကွက်ထဲတွင် နိုင်ငံခြားငွေကြေးအား ရောင်းချခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းငွေကြေးကို အားကောင်းစေချင်သည့်အခါ ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ပြည်တွင်း သုံးစွဲသူများသည် တင်သွင်းကုန်များအတွက် အနည်းငယ်သာ ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။
ဗဟိုဘဏ်မှ ကြားဝင်သည့်အခါ၊ Forex ဈေးကွက် များသောအားဖြင့် ရိုက်ခတ်မှုကြီးအနေဖြင့် တုန့်ပြန်ပါသည်။ ဒါကြောင့် ရောင်းဝယ်သူများအနေဖြင့် ဗဟိုဘဏ်၏ ငွေကြေး ကြားဝင်ခြင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို သတိပြုသင့်ပါသည်။
ဗဟိုဘဏ်မှ အတိုးနှုန်းလျှော့ချသည့်အချိန် ငွေကြေးမူဝါဒ၏ အမည်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ အကြွေးစာရင်းများ ပိုသက်သာလာပြီး၊ စီးပွားရေးအတွက် ချေးငှားခြင်းသည် ပိုလွယ်ကူလာသည်။ ဒါဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု တိုးချဲ့ခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အလယ်အလတ် အသုံးအနှုန်းမှာတော့ ဈေးပေါသည့်ပိုက်ဆံသည် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို အားပေးနိုင်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၊ ဗဟိုဘဏ်မှ ယင်းငွေကြေးမူဝါဒကို အချိန်ကြာကြာထိန်းထားပါက၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအတွက် ဆူးငြောင့်ခလုတ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိပါသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ မပါဝင်သော ငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်နှုန်းတွက်ချက်မှုအား တတိယငွေကြေးကို ဆန့်ကျင်ပြီး ငွေကြေးနှစ်မျိုးချင်း တစ်ခုစီ၏ အချိုးမှတဆင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည် - စည်းမျဉ်းအရ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ။ ဥပမာ EUR/USD နှင့် USD/JPY တို့ကို EUR/JPY ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်နှုန်းအနေဖြင့် တွက်ချက်လေ့ရှိပါသည်။ အရံငွေကြေးအတွဲတစ်ခုတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာမပါဝင်သည့်အခါ၊ ယင်းအပေါ်တွင် သွယ်ဝိုက်ပြီး သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ဥပမာများ: EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/JPY, GBP/CHF, နှင့် AUD/NZD.
ငွေကြေးများပါဝင်သည့် အစုတစ်ခုကို တောင်းထဲတွင် ပါဝင်သော အခြားငွေကြေးများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး နိုင်ငံ၏ငွေကြေး တန်ဖိုးကို တည်ဆောက်ရန် အသုံးပြုပါသည်။ ဥပမာ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ အညွှန်းကိန်းသည် အမေရိကတိုက်၏ မိတ်ဖက်ရောင်းဝယ်သူ ၆ဦးတို့၏ ငွေကြေးများနှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ ဒိုင်းနမစ်ကို ခြေရာခံပါသည်။
ငှက်အမျိုးအစား “ခို” ဟူသည့် စကားလုံးမှလာသည်။ “Dovish”သည် ဗဟိုဘဏ်မှ အတိုးနှုန်းအပေါ် ထားရှိသည့် သဘောထားကို ရည်ညွှန်းသည်။ “dovish” ဟူသည့် စကားလုံးကို သင်ကြားသည့်အခါ၊ ဗဟိုဘဏ်မှ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို အားပေးရန် အတိုးနှုန်းလျှော့နည်းခြင်းကို ရည်ရွယ်ကြောင်းဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗဟိုဘဏ်မှ ယင်း၏ အစီရင်ခံစာတွင် dovish ဖြစ်နေသည်ဟု ကြားသိရပါက၊ အနာဂတ်တွင် အတိုးနှုန်းကို မြင့်တင်ပေးမည်မဟုတ်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ပြည်တွင်းငွေကြေး ကျဆင်းလိမ့်မည်။
“hawkish” သည် “သိမ်းငှက်”ဟူသည့် စကားလုံးမှလာသည်။ “dovish” ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ဗဟိုဘဏ်မှ hawkish ဖြစ်သည့်အသံကြားရပါက၊ ဆန့်ကျင်-ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ရပ်တည်ချက်ရှိပြီး၊ အတိုးနှုန်း အမြင့်ကိုရည်ရွယ်ကြောင်း ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ရွှေစံနှုန်းသည် ငွေစက္ကူနှင့် ဒင်္ဂါးပြားတို့၏ တန်ဖိုးကို သေချာသော အာမခံ ရွှေပမာဏနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ငွေကြေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်မှာ ရွှေစံစနစ်ကို အသုံးမပြုတော့ပါ။ အစိုးရမှ အမိန့်ပေးထားသည့် ငွေပေးချေရန်အတွက် လက်ခံထားသည့် fiat(အမိန့်ပြန်တမ်း) ငွေဖြင့် အစားထိုးခံခဲ့ရပါသည်။ ဥပမာ lira သည် တူရကီရှိ fiat ငွေဖြစ်သည်။
အမှားအယွင်း၊ အထင်မြင်မှားမှု (သို့) ကြီးမားတဲ့ အလွန်ပုံကြီးချဲ့ထားသည့် ထုတ်ပြန်ချက်များကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏ ဈေးနှုန်းသည် မြင့်တက်လာသောအခါ၊ လိမ်လည်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ရတဲ့သူတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဈေးကွက်ပူလာအောင်လုပ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အမြင့်ဈေးမှာရောင်းချဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအလေ့အထသည် တရားမဝင်ပါ။
အရေအတွက် လျှော့ချခြင်းသည် (QE) ဗဟိုဘဏ်မှ အတိုးနှုန်းလျှော့ချပြီး၊ ငွေထောက်ပံ့မှု တိုးချင်တဲ့အခါဖြစ်လာသော ငွေကြေးမူဝါဒ၏ ထူးခြားတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုလျှင် ဈေးကွက်မှ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဝယ်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အပိုဆောင်းဝင်ငွေ ဖန်တီးပေးသည်။ တိုးလာသော ငွေထောက်ပံ့မှုသည် နိုင်ငံငွေကြေးအား ယင်းတန်ဖိုးကို ဆုံးရှုံးလျော့ကျစေသည်။
ဒါသည် ငွေကြေးမူဝါဒ အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း၏ အဓိက လက္ခဏာရပ်မှာ ဗဟိုဘဏ်မှ ငွေလိုအပ်ချက်လျှော့ချပြီး၊ စီးပွားရေးချဲ့ထွင်မှု လမ်းကန့်သတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အတိုးနှုန်းကို မြင့်တင်ပါသည်။ နိုင်ငံငွေကြေး တိုးလာသည်။
သင်မြင်တဲ့အတိုင်း၊ ဤဖွင့်ဆိုချက်များသည် မရှုပ်ထွေးဘဲ၊ မှတ်ရလွယ်ကူပါသည်။ သင့်ဗဟုသုတကို လေ့ကျင့်ရန် အချိန်ကောင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ FBSအားဖြင့် အခြေခံ သုံးသပ်ချက် ကိုဖတ်ရှုပြီး၊ သင်လေ့လာထားသည့် စကားလုံးများကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့၏ Forex အတိုကောက် အဘိဓာန် တွင် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ဖွင့်ဆိုချက်များကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။